Oslo: Taksiile jihada qaldan baabuurka ugu waday "Tunnel" oo boolisku ay leysinka ka qaadeen. - NorSom News
Oslo: Taksiile jihada qaldan baabuurka ugu waday “Tunnel” oo boolisku ay leysinka ka qaadeen.
Booliska magaalada Oslo ayaa bartooda Twitterka kusoo qoray inay saaka gacanta ku dhigeen taksiile baabuurka jihada qaldan ee “Operatunnelen” ugu waday in mudo ah, kahor inta aan baabuurleyda kale sixin, dibna loogu soo celin jihada saxda ah.
#Oslo: Vi har kontroll på en taxi som tok en u-sving og kjørte i motgående kjøreretning i #Operatunnelen. Sjåføren ble stoppet av bilister som kom i mot og fikk snudd taxien tilbake i riktig retning.
— OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) July 7, 2019
Taksiilahan ayaa booliska u sheegay inuu dib ugu noqday jihada uu ka yimid ee “Tunnelka”, si uu wadada uga fiirsado Mobil uu maleynayay inuu ka lumay.
Booliska ayaa sheegay inay taksiilahan meesha uga qaadeen leysinka baabuur wadista. Sidoo kale mobilkii uu raadinayay ay ka heleen gudaha baabuurka.
Nala soo xiriir: Waxaa noo shaqeeyo turjumaano Soomaali ah.
Previous articleWiil iyo aabihii Norwiiji ah oo ku dhintay shil tareen oo Denmark ka dhacay.
Next articleUSA: Maxkamad Trump ku xukuntay inuusan dad “Block” saari karin.